သူဌေးဝါဒ- Nan Taw Shae Sayar Tin - YouTube
သူဌေးဝါဒ- Nan Taw Shae Sayar Tin
Shwe Daung Taung
Unsubscribe from Shwe Daung Taung?
Myanmar Song (http://www.facebook.com/groups/Burmes...)
Composed by Nan Taw Shae Sayar Tin
တေးရေးသူ - နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်
တေးဆိုသူ - နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်
(ပိုက်ဆံရှားတာ နားမလည်)၂ x ပိုက်ဆံပေါတာ ပြောတတ်တယ် ဇဗ္ဗူဒီပ နိမိတ္တတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ သူဌေးဝါဒတွေကို ကျွန်တော်မပယ်XXXXX
(ရတနာခုနှစ်ပါးရယ်နဲ့ မော်တော်ကားလည်းရှိတယ် ဆင်းရဲတာနားမလည် မင်းပွဲမှာသွားမယ်)၂ ....အပေါင်းသဟာယများရယ်နဲ့ ကောင်းတာကိုမှစားမယ် နန်းတော်ရှေ့ကို မေးလာကြရင် သူဌေးဝါဒကို ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါတယ်....
ငွေလိုချင်ရင်ငွေဖြစ်ရမယ်... ရွှေလိုချင်ရင် ရွှေဖြစ်ရမယ်ကွယ် လူစိတ်ဓါတ်ဟာ လောကအမြတ်ဆုံး တကယ်XXXXX
စိန်လိုချင်ရင် စိန်ဖြစ်ဖြစ်ရမယ်.....အိမ်လိုချင်ရင် အိမ်ဖြစ်ရမယ်ကွယ် လူစိတ်ဓါတ်ဟာ လောကအမြတ်ဆုံး တကယ်XXXXX သြော်... ချစ်တဲ့ရည်းစား စွဲလမ်းမိတော့ မကြာဧကန်ရတတ်တယ်... ဤပမာကို မှတ်ကြဖွယ် လိုချင်တာကို ရတတ်တယ် ယူချင်တာကို ပို့လိုက်မယ်၊ နန်းတော်ရှေ့ကို မေးလာကြရင် သူဌေးဝါဒကို ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါမယ်....
(ပစ္စည်းဥစ္စာ ယခုတိုးပွားတဲ့ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ စံမနှိုင်းပါနဲ့ အမှန်အတိုင်းဆိုချင်တယ်)၂ သိန်းပေါင်း ကုဋေမရေနိုင်တယ် တို့ပိုင်ဥစ္စာကြွယ် စစ်ကိုင်းအနောက်ဘက် တောင်ပေါ်ဝယ် တို့ပစ္စည်းတွေ ကြည့်နိုင်တယ် နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် ပိုင်ပြီကွယ် နန်းတော်ရှေ့ကို မေးလာကြရင် သူဌေးဝါဒလို့ ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်...
တိုက်တွေနဲ့ စက်တွေအိမ်တွေ.... ဘာသာမျိုးခြားတို့ ပိုင်တာတွေ ဆိုင်တာတွေတဲ့ဗျ ဆိုလေတုံငြားသော်လည်း တို့ဗမာ စီးပွားဥစ္စာ ကျောင်းကန်များရယ်နဲ့ ဘုရားတွေအကုန်တည် .... နန်းတော်ရှေ့ကို မေးလာကြရင် သူဌေးဝါဒလို့ ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်...
သုမောင် (နဂါးနီ) - Duration: 8:07. richardmaungmaung 1,098,442 views
Mix - သူဌေးဝါဒ- Nan Taw Shae Sayar TinYouTube
သူဌေးဝါဒ-ပစ်တိုင်းထောင် - Duration: 7:27. Aung Myo Thu 32,594 views
တို့ဗမာ သီချင်း - Duration: 5:12. Dobama Asiayone 63,248 views
ကျေးရွာဝါဒ- Ko Ant Gyi - Duration: 5:57. Shwe Daung Taung 23,457 views
34 videos Play all နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်Shwe Toe Aung
ရန်ကုန်သူ- Ko Ant Gyi - Duration: 6:10. Shwe Daung Taung 27,005 views
တုံးကျော်မ- Mar Mar Aye - Duration: 5:26. Shwe Daung Taung 59,765 views
မြန်မာ့ရှူခင်း မြန်မာ့စိတ်ရင်း - Duration: 5:32. bluewater550 94,940 views
နတ်သျှင်နောင်- Hlwan Moe - Duration: 7:09. Shwe Daung Taung 156,510 views
Shwe Mann Tin Maung - Aung Par Sae အောငျပါစေ- Myanmar dance song - Duration: 6:05. snowflake8439 212,294 views
လူပျိုအိမ်မက်- Win Oo - Duration: 7:58. Shwe Daung Taung 5,664 views
တိမ်တမန် - စန္ဒရားချစ်ဆွေ - Duration: 7:10. snuomwoani 340,939 views
စည်တော်ကြီး- Mar Mar Aye - Duration: 6:16. Shwe Daung Taung 39,453 views
မြန်မာ့ ဂုဏ်ရည်- Win Oo - Duration: 6:55. Shwe Daung Taung 7,322 views
ဗိုလ်ရှုသဘင် သီချင်း - Duration: 5:36. Dobama Asiayone 39,398 views
ပခန်း ကိုကြီးကျော်- Noe Noe La Pyai & Group - Duration: 4:41. Shwe Daung Taung 187,126 views
Mone Shwe Yee - Win Oo - မှုန်ရွှေရည် - ၀င်းဦး - Duration: 4:56. San Lin Tun 147,803 views
လက်ခတ်သံ- Than Than Sint - Duration: 5:55. Shwe Daung Taung 181,501 views
စစ်ကိုင်းတောင်- Ko Ant Gyi - Duration: 6:11. Shwe Daung Taung 100,245 views